Epilepsy and Pregnancy - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အတကျရောဂါရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦး ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ သိထားသငျ့တဲ့အခကျြတှကေို ရေးသားဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
သန်ဓသေားဆီကို အောကျဆီဂငျြလုံလောကျအောငျ မပို့ပေးနိုငျခွငျး
အခငျြးဟာ သားအိမျကနေ အခြိနျမတိုငျခငျ ကှာကခြွငျး
အတကျရောဂါဖွဈလာတဲ့အခြိနျမှာ ခြျောကတြာ၊လဲကတြာစတဲ့ မတျောတဆမှုတှကွေောငျ့ ကိုယျဝနျပကျြကခြွငျး စသညျတို့ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှဟော ကိုယျဝနျရတဲ့အခါ အတကျရောဂါကို တုံ့ပွနျပုံခွငျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတူကွပါဘူး။ အမြားစုကတော့ အရငျအတိုငျးပါပဲ အခြို့ကတော့ တကျတာနညျးသှားတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိပျရေးပကျြတာမြားပွီး ဆေးပုံမှနျမသောကျဖွဈရငျတော့ အတကျရောဂါကပိုဆိုးတတျပါတယျ။
အတကျကဆြေး (Anti-seizure medications) တှဟော အကွောငျးတဈခုနဲ့တဈခုဆကျနှယျပွီး ကလေးကိုသကျရောကျမှုတှရှေိနိုငျပါတယျ။ မှေးရာပါခြို့ယှငျးခကျြတှဖွေဈစနေိုငျပါတယျ။ ဆေးကိုတဈမြိုးထကျပိုပွီးသောကျနရေတယျဆိုရငျ ဖွဈနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။
ကိုယျဝနျမရခငျ ကိုးလအတှငျးမှာ အတကျရောဂါထမဖွဈပျေါမလာဘူးဆိုရငျ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာလညျး အတကျရောဂါပျေါလာနိုငျခြေ နညျးပါတယျ။ နှဈနှဈကနေ လေးနှဈအတှငျးမှာ မတကျဘူးဆိုရငျတော့ ကိုယျဝနျမဆောငျခငျမှာဆေးတှကေို ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီးဖွတျလို့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အတကျရောဂါရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ဆေးကို ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြအတိုငျး ဆကျလကျသောကျရမှာပါ။ ဆရာဝနါက မိခငျရော ကလေးအတှကျပါ အန်တရာယျအနညျးဆုံးနဲ့ စိတျအခရြဆုံးဖွဈမယျ့ ဆေးပမာဏကို ပေးမှာဖွဈပါတယျ။
*ကလေးကိုစိတျခရြ မရ ဘယျလိုသိရှိနိုငျမလဲ?
ဆရာဝနျဟာ ကလေးရဲ့ကနျြးမာရေးကို တောကျလြှောကျလလေ့ာပေးနမှောဖွဈပါတယျ။ Ultrasound ကိုအကွိမျရစေိပျစိပျရိုကျပွီး ကလေးကို စဈဆေးမှာဖွဈပါတယျ။ အခွားသော စဈဆေးမှုတှကေိုလညျး လိုအပျသလိုပွုလုပျပေးမှာဖွဈပါတယျ။
မိခငျနို့တိုကျကြှေးလို့ရပါတယျ။ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျတဲ့အခါ သူကလိုအပျတဲ့ အတကျကဆြေး ပမာဏကို ဆကျလကျထိနျးညှိုပေးပါလိမျ့မယျ။
အတကျရောဂါရှိတဲ့ အမြိးသမီးတိုငျးဟာ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ
ကိုယျဝနျအောငျ အားဆေး ၊ ဗီတာမငျမြားသောကျသုံးခွငျး၊
Folic acid သောကျခွငျး
ဆေးလိပျ၊အရကျ၊ မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ ကျောဖီစသညျတို့ကို လုံးဝရှောငျကွဉျရပါမယျ။
ဒီအခကျြတှကေို သိရှိနားလညျပွီး လိုကျနာဆောငျရှကျခွငျးဖွငျ့ မိခငျလညျးကနျြးမာ၊ ရငျသှေးငယျလညျးကနျြးမာနိုငျစဖေို့ ကို ရေးသားလိုကျရပါတယျ။
အတက်ရောဂါရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကို ရေးသားဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
သန္ဓေသားဆီကို အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်အောင် မပို့ပေးနိုင်ခြင်း
အချင်းဟာ သားအိမ်ကနေ အချိန်မတိုင်ခင် ကွာကျခြင်း
အတက်ရောဂါဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ချော်ကျတာ၊လဲကျတာစတဲ့ မတော်တဆမှုတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း စသည်တို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ရတဲ့အခါ အတက်ရောဂါကို တုံ့ပြန်ပုံခြင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး။ အများစုကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ အချို့ကတော့ တက်တာနည်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ရေးပျက်တာများပြီး ဆေးပုံမှန်မသောက်ဖြစ်ရင်တော့ အတက်ရောဂါကပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
အတက်ကျဆေး (Anti-seizure medications) တွေဟာ အကြောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီး ကလေးကိုသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုတစ်မျိုးထက်ပိုပြီးသောက်နေရတယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်မရခင် ကိုးလအတွင်းမှာ အတက်ရောဂါထမဖြစ်ပေါ်မလာဘူးဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလည်း အတက်ရောဂါပေါ်လာနိုင်ချေ နည်းပါတယ်။ နှစ်နှစ်ကနေ လေးနှစ်အတွင်းမှာ မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်မှာဆေးတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အတက်ရောဂါရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆက်လက်သောက်ရမှာပါ။ ဆရာဝနါက မိခင်ရော ကလေးအတွက်ပါ အန္တရာယ်အနည်းဆုံးနဲ့ စိတ်အချရဆုံးဖြစ်မယ့် ဆေးပမာဏကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
*ကလေးကိုစိတ်ချရ မရ ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ?
ဆရာဝန်ဟာ ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကို တောက်လျှောက်လေ့လာပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ultrasound ကိုအကြိမ်ရေစိပ်စိပ်ရိုက်ပြီး ကလေးကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော စစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်း လိုအပ်သလိုပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးလို့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တဲ့အခါ သူကလိုအပ်တဲ့ အတက်ကျဆေး ပမာဏကို ဆက်လက်ထိန်းညှိုပေးပါလိမ့်မယ်။
အတက်ရောဂါရှိတဲ့ အမျိးသမီးတိုင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ
ကိုယ်ဝန်အောင် အားဆေး ၊ ဗီတာမင်များသောက်သုံးခြင်း၊
Folic acid သောက်ခြင်း
ဆေးလိပ်၊အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ကော်ဖီစသည်တို့ကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
ဒီအချက်တွေကို သိရှိနားလည်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မိခင်လည်းကျန်းမာ၊ ရင်သွေးငယ်လည်းကျန်းမာနိုင်စေဖို့ ကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Health Impact on Lack of Breastfeeding